Amandla weTheta Brainwave Ukuphilisa
by UMikhal Golan, umfundisi we-Theta
Imvelaphi yokuphulukisa i -ta
Ngama-1990 e-Idaho, uVianna Stibal wakhutshwa ngokufumanisa okuphawulekayo. Akazange nje abe nesipho sendalo ukuba 'afunde' ngaphakathi kwimizimba yabantu (jonga i-intuition yezokwelapha) ngokuchanekileyo ngokuthe tye kodwa unokubona ubungqina babo bokuphilisa okubonakalayo phambi kweso lakhe langaphakathi. Oku kwakunomdla gqitha kuba yena ngokwakhe wafumanisa ukuba unesifo esibi emlenzeni wakhe osekunene. I-biopsy yamshiya ngentlungu enzima kunye neentonga zontandathu kwiiveki kodwa waqhubeka ehambisa imizimba kunye nokufunda okunemibono kubantu abangekho ngaphantsi.
Oogqirha bathi iyona nto ingcono yokulondoloza ubomi bakhe yayiyikumnqumla umlenze wakhe, kodwa ngokuqinisekileyo ukuba uMdali Wezo Zonke Unokuphilisa ngokukhawuleza, wayethemba ukuba indlela iya kuboniswa kuye.
Inkqubo yokuphungula ama-Brain Waves kwiTheta
UVianna utshela indlela enye imini ephoxela esitratweni kuye kwenzeka ukuba xa ebingqina abanye bephilisa, mhlawumbi unokuziphilisa ngokwakhe kwaye ngaloo mzuzu uThixo wamphendula ekuqinisekiseni kwakhe kwaye umlenze wakhe ubuyele ebude bawo obude. Ukuvuvukala kwehla kwaye kwithuba elilandelayo khangela ukuba akukho mqondiso womhlaza. Ngentshiseko enkulu, waqala ukwenza le ndlela yokuphilisa kunye nabaxhasi bakhe kwaye igama laqala ukuphuma. Kwiinyanga ezimbalwa, kwakukho abantu ababethelela kwiiplasi zase-Idaho ezivela kulo lonke ilizwe. UVianna wayengazi kakuhle ukuba kutheni ukuphulukiswa kwenzeka kodwa emva kokuba enze uphando olunzulu, wagqiba ekubeni kufuneka aphucise iingcamango zengqondo kwi -ta xa ebonisa ukuphulukiswa okuvumela ukuphulukiswa ukuqinisa ngokuthe ngempumelelo.
Waqala ukufundisa le ndlela kuye nabani na owayenomdla wokuphulaphula waza wabiza igama, Theta Healing .
Uphi u-Theta Healing?
Uvuka kusasa, usaphila phantsi kwephupha lakho ebusuku, uzama ukukhumbula ngeenkcukacha zayo iinkcukacha. Ngomzuzwana, usenako ukubambelela kuloo mbono onokumangalisayo, uvakalelwa kukuba umthamo kunye nomgca.
Uzama ukuhamba, kungekhona ukukrola, mhlawumbi unokuqhubeka ... mhlawumbi unako ukugcina loo mava ephilileyo. Ngelo xesha, inxalenye yakho iyavuka. Uyayiva inja igxuma ngaphandle, ummelwane uqala imoto, kwaye uvakalelwa kusasa ekuseni ilanga liphuma emaphethini. Iphela nje imizuzwana embalwa kwaye ngokukhawuleza, iphelile. Uvuke ngokupheleleyo. Iphupha eliyiphupha liphela, imemori iyaba yinto enzima njengokuba uye wahamba ibanga elide kakhulu kuyo ngelixa umjikelezo wolu hlobo lwamabala kunye nokulahleka. Ekugqibeleni, amava angama-visceral kwimeko yephupha ayaphela ngokupheleleyo. Ngethuba lezo zihlandlo ezixabisekileyo phakathi kokuvusa nokulala iingqondo zakho zale ndawo.
Ukukhawuleza kweeTheta Waves
Ingqondo yethu ikhiqiza ii-electrical frequencies (kulinganiswa ngamacandelo e-hertz-inani lezijikelezo ngeesibini), ezitshintsha ngokubhekiselele kumbuso esikuyo. Ngethuba lokulala ubuthongo obukhulu, ubuchopho bethu buvelisa amaza aphantsi kakhulu (i-delta), ngeli xesha ngexesha lokuvuka kwaye ukulala kwengqondo kuvelisa amanqabana anesantya ebizwa ngokuba yi -ta (imijikelezo ka-4-7 ngesibini). Ngethuba lokucamngca kunye nokuphumla okunzulu , xa sifudukela kwintsimi enhle, siphefumle kwaye sivale amehlo ethu, ingqondo isasaza amagagasi e-alpha (7-14) kwaye xa sisebenza ngokugcwele, sigxininise kwimisebenzi yethu, amaza e-beta (14-28 ).
Isimo sokufunda okunzulu sithathwa njenge-beta ephezulu okanye ngamanye amaxesha kuthiwa ngamagagma e-gamma (ukuya kuma-40 imijikelezo ngemizuzwana). Umbuso ocacileyo uboniswe ngamandla ethu okutshintsha ngokukhawuleza ukusuka kwimizila ethile ukuya kwelinye ngaphandle kwemigudu. Olu buchule ekugqibeleni lithetha ukuguqulwa kwengqondo kunye nokusebenza okufanelekileyo kuzo zonke iinkalo zobomi.
Ukufumana iTheta - Amaxesha Phakathi Kokuvuka Nokulala
Masibuyele emzuzwana kwi-brainwave. Ingqondo yethu iyancipha kule nkqubela phantsi kweemeko ezahlukahlukeneyo, zonke ezivumela ukuba sifinyelele ubuchule obukhulu kunye nokungabikho kwegama elingcono, inyaniso "elastic". Isinika ithuba lokufumana into ecacileyo ngokucacileyo, ngaphezulu kwamanani amaninzi. Ngethuba lexesha phakathi kokuvuka nokulala, sinokuthi sibe nolwazi oluthile oluzimeleyo lwemithetho yomzimba, engenakho ukulungelelaniswa komhlaba.
Ngomzuzwana, nangona sesele siphapheme, sinqatshelwe ngombono wethu weengqondo, sinokuqonda into eyona nto apho sinegunya lamandla amakhulu. Ndikhumbule ixesha ebomini bam xa ndandisoloko ndiphupha ukuba ndingenasiphelo kwaye ndiza kuhamba ngendlululo, ndiphakamise umhlaba kwaye ndichukumise ngokukhawuleza umhlaba ukuphakanyiswa kwakhona. Ukuziva kwakunjalo, ngoko-visceral (kwaye ngokumangalisayo) ukuba xa ndivuka, ndiqinisekile ukuba ndinegunya lokuqhubeka ndikwenza oko kuphela ukuba ndidideke kakhulu xa ndivula amehlo ndibeka iinyawo zam emhlabathini.
I-Theta Ngaba i-Brainwave isetyenziswe kwi-Hypnosis
Ukuba uke wabukela umboniso we-hypnotherapy, ngokuqinisekileyo uyabona ukuba abathathi-nxaxheba bakhethwe njani kubaphulaphuli, bakwazi ukwenza izenzo ezingenakunqwenelekayo abazingacingi ukuba banakho. Ezi zinto aziyiziqhinga, kwaye ayinakwenziwa. Ikwazisa ngamandla angapheliyo ahleliyo ngaphakathi kwethu. Ndiyakhumbula ngokucacileyo ukuba umzimba wentombazana encinane, elincinci elingaphantsi kwe-hypnosis yabekwa phakathi kweetyhulo ezimbini ezazijongana nezikhwebu kangangokuthi iinyawo zakhe zazibekwe ngaphaya komgcini wesitulo esinye kunye nentamo yakhe ngaphaya komnye ngaphandle kwenkxaso . Isikhumbuzo sakhe samkela umyalelo ukuba uqine njengeqhekeza lomthi. I-hypnotherapist, owayengumfana omkhulu, wahamba esihlalweni waza wahamba emzimbeni wakhe ngobunzima bakhe bonke. Akazange ahambe, akazange adibane kwaye izibambo zakhe azizange zonakalise. Wayeya kumangaliswa ukuba wayezibukele oko kodwa ngokumangalisa, lo mandla uhlala phakathi kwethu sonke.
Sinamandla amakhulu kunokuba sinokukucinga. Ngoko umbuzo uvela, ukuba sinokwenza oku ngaphantsi kwe-hypnosis, kutheni singasikhupheli?
Siphinde siphume kwi-brainwave xa simi phezulu kwintaba ejikelezwe yinto enhle yendalo yokuvakalelwa yendalo kunye nomhlaba wonke! Amaxesha ngexesha esiva ngathi ludibene kuyo yonke impilo kwaye siyazi ngokuqinisekileyo ukuba kukho amandla aphezulu kwaye ukuba siyinxalenye yalo. Abantwana bedlala imidlalo yevidiyo bayangena kwiimeko ezixhomekeke kwi-trance ezibonakala zinxulumene ne-brainwave. Ngokuqhelekileyo, abantwana abafikelela kwi-13 ubudala, bachithe ixesha labo eli lizwe kwaye kuba kunjalo, ngokuqhelekileyo. Yingakho kubalulekile ukufundisa abantwana ngokucwangcisa nangokucamngca.
Ubuninzi obuninzi, Ukuphefumlelwa, kunye neIntuition
Xa siqala ukuhamba phakathi kwimizuzu kunye nemizuzu engamashumi amabini kamva sitsho 'sivuke' ngokukhawuleza size siqaphele ukuba asinalo ncam eyazi ukuba yintoni eyenzeka ngathi ngathi kule mizuzu engama-20, sinokuthi sitshitshise kwi-brainwave. Ngokuqhelekileyo, iingcamango esizifumanayo ngexesha lethu le-adventure alukho phantsi kohlengahlengiso lwethu oluqhelekileyo. Sifumana nje ekuphumeni (okanye kummandla). Kuphela emva kokuba siphinde sibuyele kwi-beta yelizwe esebenzayo, ukuba sinyanzelise iinkqubo zethu zokucamngca ezikhethekileyo kwaye senze ukuba sinokuyithatha ingqalelo njengoko kuthethwa ukuba 'kungenakuphikelela', 'kungenangqiqo', 'kungenangqiqo' njl.
Omnye umzekelo we-state ye -ta yinto ebonakalayo ye-fakirs e-Indiya enokuhamba ngamalahle avuthayo ngaphandle kokutshisa isikhumba.
Iindaba zezenzo ezingenakwenzeka abantu abazenzayo phantsi kweemeko ezinzima ezifana nomfazi ophakamisa isithuthi ukugcina umntwana phantsi koko kubonisa ukuba lamagunya amakhulu angabantu esinabo kwaye anxulumene ne -ta. Le ngcamango ithathwa njenge-brainwave ye-subconscious kwaye ixanduva elikhulu kuzo zonke iiprogram kunye neenkolelo esizifake kwaye ziqhuba ubomi bethu. Enye yezizathu kuba kunzima ukulahla ezo nkolelo nangona siye sazifumanisa. Ngakolunye uhlangothi lwengqekembe, xa sikholelwa ngamandla ngamandla ethu onke ukuba sikwazi ukwenza into ethile, okanye ukutshintsha into nangona kubonakala ngathi iyanceda imithetho yezesayensi, siya kuba nakho . I-braintave ye-theta idibaniswa nobuqili, ukuphefumlelwa, intuition kunye nokukhanyiselwa kokomoya okusivumela ukuba senze ngaphandle kwemilinganiselo engabonakaliyo yeemvakalelo ezintlanu kunye nokuqonda kwethu.
Ngaba Siyakwazi Ukuqeqesha Ubunzima Bethu Ukuze Buphume?
Kutheni singasichitha ixesha elingaphezulu kweli lizwe elimangalisayo? Kutheni singasifumani amandla ayo rhoqo? Ngokuqinisekileyo kubonakala ngathi ukuba sinokuphucula iingqondo zethu kwi-theta, sinokubonakalisa lula, siphilise ngakumbi, senza izinto ezintsha kwaye sibonise imibono emitsha. Siyakwazi ukuvakalisa ethu amandla kwaye mhlawumbi sitshintshe ihlabathi ... ??
Ngokwenene sichitha ixesha elininzi kweli lizwe elihle kakhulu, ngokwenene, ubusuku bonke. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi sinokulawula okuncinci okanye akukho nto! Kubonakala ukuba i-brainwave iyancipha, kunzima nakakhulu ukufikelela kuyo ngokuqaphelayo. Ingqondo eyaziwayo, ngento nje yokwazi, ikhupha i-frequency frequency ithi. Ingqondo eyaziwayo ibona ingqiqo ngeengqondo ezi-5 kwaye ibanjwe ingcamango engabonakaliyo yinto enokwenzeka. Siyazi ukuba kunokwenzeka ukuqeqesha ingqondo ukuba ihlawule. Ngethuba lokuzama ukuhlolwa kwe-biofeedback, iqela lezonxila liqeqeshiwe ngeeseshoni ezili-15 ezahlukileyo ukucotha i-brainwave kwi-alpha kunye ne-theta. Uvavanyo lwalwenziwa ngamaqela amabini olawulo, kwaye iziphumo zithembisa kakhulu, ezibonisa ukhetho olukhethekileyo kulolu hlobo lwezonyango ezineziphumo ezide ezide. Kodwa ubani onayo imali okanye ukufikelela kwezi ntloba zonyango?
Ngaba unokucingela zonke iindlela ezisetyenziswayo kule ngqondo engummangaliso? Umzekelo: uninzi lophando olwenziwe ngokuphulukiswa ngokukhawuleza lomhlaza lubonisa ukuba phantse kuzo zonke iziganeko, izigulane zifumana ukutshintshwa okuphawulekayo kwimbonakalo phambi kokubonakala kwonyango njengokungathi 'bayazi' ukuba baya kuphulukiswa baze bazive idibene nomthombo ngaphandle kwabo.
UVianna Stibal waqonda ukuba ukuphilisa kwakuyimisebenzi ye braintave. Ngokutsho kwesityhilelo sakhe, xa eqikelele ingqondo yakhe ngaphezu kwendawo yakhe waza wambiza uMdali, ingqondo yakhe yanciphisa kwi-theta kwimizuzwana engaphantsi kwe-30 kwaye ke wakwazi ukubona izinto ezinokumangalisayo. UMdali wayenza ukuphiliswa kodwa kwafuneka afumane ubungqina ukuze kuvezwe kwimizimba yomzimba. Kuze kubekwe ubungqina, ihlala isentsimini yobunokwenzeka. Emva kokuba 'sibone' ukuphilisa okubonakalayo kwaye 'uyazi' ukuba kwenziwa 'kwenzeka. Kwimijikelezo engama-4-7 ngelixesha lesibini, ingqondo ikwazi ukufikelela amathuba angenamkhawulo ngaphandle kommandla weengcamango zengqondo.
Omnye wabafundi bakaVianna wamemezela ukuba akukho ndlela yakwazi ukufikelela kuyo, makungabikho, yibambe, i-braintave iyazi kakuhle. Wayesebenze kwintsimi ye-biofeedback iminyaka, wathi ngaphandle kokuba abantu babe phantsi kobuthongo obunzulu, abanako ukugcina le nxeba. UVianna wayezimisele ngakumbi ukubonisa ubungqina bakhe. Kwixesha elifutshane emva koko, umntu wayemboleke nge-EEG (umatshini we-electro-encephalograph). Baxhamla bonke abafundi kumatshini baze baqiniseke ngaphandle kwesithunzi sokungabaza ukuba bonke babenako ukucotha i-brainwave phantsi kwe-minute ngaphakathi kwimizuzu kwaye kungekhona nje loo nto, kodwa abathengi ngokwabo babonisa ukuba iingqondo zabo zanciphisa.
Ukufikelela kwiiNdawo ezingenamkhawulo
Ngosizo lwaloo ngqondo, ukwandiswa kwamandla, ukukwazi 'ukubona' nokuva 'ngaphandle' kwemida yentsingiselo yomzimba iya kwandisa, kwaye sinokutshintsha ingcamango yethu engaphelelwanga yinyani. Wonke umntu unokukwenza. Siqeqesha ubuchopho bethu ukuvusa amandla okugcina kunye nokuqondisa iingqondo zethu ukuba sikholwe ngamathuba angenamkhawulo. Eyona nto siyibuyisela phambili ubuchopho bethu kwiimpawu ezingqinisisekileyo, enye ehambelana neNyaniso. Yonke into esiyidingayo inkolelo kumandla aphezulu kunye nomnqweno wokufumana nokubonisa amandla ethu ngokupheleleyo njengabantu. Kufuneka silwele ngaphezulu; bakholelwa ukuba sinamandla amakhulu kunokuba isayensi, amayeza, okanye nawaphi na amabango amagunya esinawo. Xa sisebenzisa umboniso wethu wezinto ezininzi, sinokubonisa ngakumbi amandla angaphezulu ebantwini.
Iphupha : Iingubo eziqhelekileyo zengubo | Ubuncwane kwiiNdondo | Lucid Dreaming | Iphunga lomphunga | Ukugcina i-Dream Diary | I-Dreamcatchers | Amandla weTheta | Ukuvula Iifoto Zakho Umsebenzi
UMikhal Golan ungumphilisa onempilo, umcebisi ngokomoya kunye nomqeqeshi we-Theta Healing anamava angaphezu kwe-18 kwilinye iyeza kunye noxolo olungaphelelanga. Uhamba ehlabathini lonke kwaye ukhokelela kwiisemina zee-certification kunye neeworkshops.
UkuCamngca kweMpilo kunye neMiboniso yokuKhokela
Liyini igama le-My Guardian Angel?
Ukunyangwa kwamanzi njengonyango loPiliso
Kutheni Iingelosi Zandibethela?
Umnxibelelwano Womoya: Sebenzisa Umphefumlo Wakho njengoMlamli
'INqwelana' yeQela leGalofu: Yintoni eyiyo kunye nokuCwangciswa koBuchule
Inombolo yeGurmukhi eGurbani Illustrated
Ziziphi iikomiti zeeNgcaciso zeZikolo ezizimeleyo?
Le Nozze Di Figaro I-Synopsis
Yintoni iTaj Mahal?
Imbali ye Bha yibhile
Iimpawu eziphambili zeDenny Crane
Isihlandlo sokufaka isicelo kwiSikolo sezoLimo
Imbali yoMkhosi weMikhosi yamaLwandle
Indlela yokudibanisa "uBaigner" (kuBathe)
I-Post-It Phawula amaqhinga okuphucula ukuqonda
Imfuneko yokusebenzisa i-visa con proceso expedito
Indlela yokusebenzisa i-French Preposition 'Phala' ('Ngokuba')
Iingxelo zoNcedo lokuPhulukiswa kweMikhosi ye-Sweat Lodge
Isingeniso kwiiFrentshi ezixinezelekileyo izivakalisi -Izithethi zeDesjoints
Indlela Yokudibanisa "Umntu Obhekiweyo" (ukuya kumsimo) ngesiFrentshi